वाम गठबन्धन र कांग्रेसले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाए, को को छन उम्मेदवार ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
वाम गठबन्धन र कांग्रेसले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाए, को को छन उम्मेदवार ?
१६ कात्तिक, इलाम । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) /नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धन तथा नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन् । दलहरूले बुधबार सबै उम्मेदवारको नामलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनबाट एमालेका झलनाथ खनाल र काँग्रेसबाट भूपेन्द्र कट्टेलले चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् । खनाल यसअघि पनि तीनपटक क्षेत्र नं १ बाट लगातार सांसद बनिसकेका छन ।
कट्टेल यसपटक खनालसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै छन । इलाम क्षेत्र नं २ मा गठबन्धनबाट एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र काँग्रेसका केशव थापा उम्मेदवार बनेका छन ।
Previousदुईलाख राशिको नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा–साहित्य पुरस्कार जनकपुरीलाई
Nextकिन आए भारतीय सुटर काठमाडौं, गोली कसलाई लाग्यो ?